हरेक दिनमा हुन्छ एक गोल्डेन मिनेट, ईश्वरलाई भेट्न सकिने विश्वास
जो मानिस चमत्कार, आध्यात्म र दैवी शक्तिमा विश्वास गर्छन्, उनीहरु सोच्छन् ईश्वरले कुनै पनि बेला आपूm भएको महशुष गराउँछ । दैवी शक्तिमा विश्वास गर्ने व्यक्ति मान्छन् कि ईश्वरले उनीहरुका हरेक चाहना बुझेको हुन्छ । यदि सच्चा मनले कुनै पनि वर माग्यो भने ईश्वरले पूरा गर्छ ।
आधात्मका ज्ञाताहरु भन्छन् कि दिनभर २४ घण्टामा एक मिनेट यस्तो हुन्छ, जतिबेला व्यक्तिको मुखबाट निस्केको हरेक कामना पूरा हुन्छ । त्यतिबेला जे माग्दा पनि पूरा हुने विश्वास गरिन्छ । उक्त मिनेटलाई ‘गोल्डेन मिनेट’ भनिन्छ ।
तर यो गोल्डेन मिनेट आउँछ कहिले ? दिनको कुन क्षण त्यस्तो हुन्छ, जब हाम्रो मनको चाहना ईश्वरसम्म पुग्छ ?
यो गोल्डेन मिनेटको गणना गर्ने एक विशेष सिद्धान्त छ । यसका लागि तपाईले महिनाको सुरुवात र दिनको आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यदि आज अंग्रेजी महिना जुलाईको २२ तारिख हुन्थ्यो भने तपाईको गोल्डेन मिनेट हुन्थ्यो २१ः२२ अर्थात रातिको ९ बजेर २२ मिनेट ।
यदि आज अगस्ट महिनाको १० तारिख हुन्थ्यो भने तपाईको गोल्डेन मिनेट हुन्थ्यो २३ः२३ अर्थात रातिको १० बजेर ८ मिनेट ।
२५ देखि ३१ तारिकको बीचमा यसलाई उल्टा गणना गरिन्छ । जस्तै कि जनवरी २५ हो भने १ः२५ गणना गरिन्छ । साउन २८, २०७४ मा प्रकाशित